Kulan looga arrinsanayo horumarinta caafimaadka Soomaliya oo ka furmay Garoowe. – Radio Daljir
Kulan looga arrinsanayo horumarinta caafimaadka Soomaliya oo ka furmay Garoowe.
Maajo 21, 2012 12:00 b 0
Garowe, May 21 – Waxaa maanta ka furmay caasimadda Puntland ee Garoowe shir wayne looga hadlayo horumarinta caafimaadka Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya madax katirsan wasaaradda caafimaadka ee dowladda faderaalka KMG ee Soomaaliya, Maamulada Puntland, Somaliland iyo masuuliyiin kasocota ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed iyo gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya, waxaana goob joog ka ah madax katirsan deeq bixiyeyaasha danyeeya arimaha Soomaaliya.
Ujeedka shirka oo ah sidii la isaga kaashan lahaa horumarinta caafimaadka ee Soomaaliya ayaa socon doona muddo sadex maalmood ah. Wasiiru dowlaha qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ee Puntland oo ka hadlay furitaankii shirkan ayaa soo dhoweeyey ergada kale duwan ee ka qaybgalaysa shirka. Waxaa uu sheegay shirkaan inuu taaba gelin doono wajji cusub oo ah in shirar noocan oo kalle lagu qabto dalka gudihiisa, halka markii hore lagu qaban jiray dalalka dariska ah ee Soomaaliya.
Waxaa uu u mahadceliyay wasaaradda caafimaadka Puntland oo shirkan marti gelisay iyo xubnaha shirka ka qaybagalaya.
Shirka oo ka soconaya xarunta wasaaradda caafimaadka ee Puntland ayaa la filayaa inay kasoo baxaan nuxur qoraaleed kusaabsan horumarinta caafimaadka guud ee Soomaaliya.
Mareykanka oo Gaadiid ugu deeqay dawladda federaalka